HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Goujrati Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Otomi (Lohasaha Mezquital) Pendjabi Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Nisy mpianatry ny oniversite nitsidika ny birao sy trano fanontam-pirintin’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Meksika, ary nilaza ny Gaceta, gazetin’ilay oniversite, fa nanampy azy ireo “tsy hitsara an-tendrony” izany.
Hoy ireo mpianatra:
“Gaga izahay fa mahafinaritra be ny toetran-dry zareo. ... Mifanaja, mahalala fomba, tsy mifanambany, ary tia fahadiovana ry zareo.”
“Tsara alain-tahaka ny toe-tsain-dry zareo tia miara-miasa.”
“Nifantoka tamin’ny asany izy rehetra sady nitsikitsiky daholo.”
“Nampiaiky volana anay ny firindran’ny asa tao amin’iny trano fanontam-pirinty iny.”
Mpianatry ny oniversite ao Mexico, ao amin’ny sampam-pampianarana mandalina momba ny fitehirizam-boky no niteny an’ireo.
Azo tsidihina maimaim-poana ny birao sy ny trano fanontam-pirintin’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny tany 100 eo ho eo. Raha misy te hitondra mpianatra hitsidika ny iray amin’ny sampanay, dia jereo ao amin’ny tranonkalanay ny tsipiriany momba ny toerana sy ny fotoana azo anaovana an’izany. Jereo ao amin’ilay hoe MOMBA ANAY > BIRAO & FITSIDIHANA. Afaka mitsidika koa ny olon-kafa sy ny fianakaviana.